Khilaaf soo kala dhex galay Galmudug iyo Ximan iyo Xeeb.
Kadib markii shalay Burcad badeed Soomaali ah ay ku rasaaseeyeen degmada Hobyo Cabdi Xasan Cawaale Qeybdiid ayaa waxaa arintaasi ka hadlay Maamulada Galmudug iyo Ximan iyo Xeeb.
Afhayeenka Maamulka Ximan iyo Xeeb ayaa waxa uu uga digay Qeybdiid in uu joojiyo qorshe uu sheegay in uu doonayo in uu ku furo Dekada Hobyo, iyadoo aan lagala tashan Ximan iyo Xeeb, waxaana uu sheegay in Dekadaasi hadii la furo iyaga aan waxba ka ogeyn ay ka dhalan karaan dagaalo sokeeye oo dhex mara labada Maamul.
Wasiirka Warfaafinta Maamulka Galmudug Axmed Baasto oo ka jawaabay hadal kasoo baxay Ximan iyo Xeeb ayaa waxa uu sheegay in wax lala yaabo ay tahay hadalka Maamulka Ximan kaasi oo uu sheegay in uu indhaha istirayo.
Hadii aan ku dhaho aniga oo Axmed Baasta ah waxaan ka talinayaa degmada Cadaado oo la ogyahay qolada dagta oo lagu yaqaano ma iga aqbali lahayd, sidaasi si la mid ah ayaan loo aqbali Karin in Ximan iyo Xeeb sheegato Hobyo oo la ogyahay dadka daga ayuu ku jawaabay Axmed Baasto.
Khilaafkaani waxa uu carqaladeen karaa qorshe ay Galmudug ku doonayso inay ku balaariso Maamulka Galmudug maadaama Ximan iyo Xeeb ay ka mid ah Maamulada ka jira gobolada dhexe.